Solar Explosion « MMWeather Information BLOG
« Supermoon 2012 မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေ။ »
By heronaing, on May 6th, 2012
jin မေးတဲ့နေပေါက်ကွဲမှု Solar Explosion ဆိုတာလေးပါ။
နေကြီးဟာ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့စကြ်ာဝဠာကြီးကို စက္ကန့်မပြတ် အလင်းပေးနေတဲ့ သဘာဝကြီးက ဖန်တီးပေးထားတဲ့ မီးလုံးကြီးတခုနဲ့ တူပါတယ်။
အမြဲတစေ နေ့ညမပြတ် အလင်းရောင်ကို ထုတ်လွတ်ပေးနေခဲ့တာ စကြ်ာဝဠာကြီး တည်တဲ့နေ့က စတင်ပြီးတော့ ယခုနေ့အထိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ ကြီးနဲ့ နေကြီးဟာမိုင်ပေါင်း(93)သန်းခန့် ကွာဝေးပါတယ်။ နေကြီးဆီက အလင်းရောင်ကို တစက္ကန့်လျှင် 186000 m/s မိုင်နှုန်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးဆီကို ရောက်လာခဲ့တာပါ။ တကယ်ဆို နေဟာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓါတ်ငွေ့လုံးကြီးတခုပါ ဓါတ်ငွေ့ကိုမီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီး အပူနဲ့အလင်းကို ထုတ်လွတ်ပေးနေခဲ့တာပါ။ ထိုနေလုံးကြီးဟာ တစုတဝေးတည်း မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီး ဆင့်ကဲပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်တွေ အစဉ်တစိုက် ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ရတာပါ။သို့ရာတွင် တခါတရံ မှာတော့ထူးခြားဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ ပေါက်ကွဲအားပြင်းထန်တဲ့ နေအတွင်းပေါက်ကွဲမှုမျိုး ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ နေပေါက်ကွဲမှုဆိုတာဟာ အရင်ကတည်း
က ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ ဒီလိုပေါက်ကွဲပြီး ထွက်လာတဲ့မီးလျှံတွေဟာ ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ ရုတ်တရက်ဖြာထွက်ပြီး ရောက်ရှိလာတတ်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့မီးပုံကြီးတပုံကို မီးရှို့တဲ့အခါမှာ တခါတရံ မီးတောက်တွေဟာ အောက်ကမီးပုံကြီးနဲ့ မဆက်တော့ပဲံ ပြတ်ထွက်သွားပြီး အပေါ်သို့တက်သွားတဲ့ သဘောမျိုးပါ။ မီးတောက်က မီးလျှံကြီး ပြတ်ထွက်သွားတာ ဘာမှမဖြစ်လိုက်ပေမဲ့လို့ နေကပြတ်ထွက်လာတဲ့ ဆိုလာပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မီးတောက်ကြီးတွေဟာ ကမ္ဘာကြီးဆီသို့ နာရီပိုင်းအတွင်း ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ နေပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရောက်ရှိလာတဲ့ မီးလျှံတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးမှာရှိတဲ့ သံလိုက်ဝင်ရိုးစွန်းတွေကို အပြင်းအထန် နှောက်ယှက်နိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပတ်လမ်းအတွင်း လွတ်တင်ထားတဲ့ ဂြိုလ်တုတွေ၊ နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်းတွေရဲ့ အီလက်ထရွန်နစ်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကို ကြီးမားစွာ ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ ပျံသန်းနေတဲ့လေယာဉ်ကြီးတွေ၊ ပင်လယ်ပြင်ကြီးမှာခုတ်မောင်းနေတဲ့ သင်္ဘောတွေရဲ့သံလိုက်လမ်းညွန်စနစ်၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ပျက်စီးမှုကြောင့် (Auto Pilot System)နဲ့ မောင်းနေတဲ့ယာဉ်တွေအဖို့ သိပ်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေကို ဖြစ်စေပါတယ်။မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးစနစ် အတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ မိုက်ကရိုဝေ့ စနစ်တွေပျက်စီးပြီး၊ အဆက်သွယ်ပြတ်တောက်ကုန်နိုင်ပါတယ်၊ အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ ရုတ်တရက်နှေးကွေး ပြတ်တောက်စေနိုင်ပါတယ်၊ ကမ္ဘာကြီးတခုလုံး ခြုံငုံပြီးတခုနှင့်တခု ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဂြိုလ်တု(24)လုံးပါ (GPS)စနစ်တခုလုံးကို ပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်၊ ဒါဟာလူတွေအတွက် သိပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ လမ်းညွန်တခုလည်း ဖြစ်ပါတယ် စသည့် ဆိုးကြိုးပေါင်းစုံကို တချိန်တည်းခံစားနိုင်ရသည်မို့ အရမ်းပဲ စိုးရိမ်စရာအခြေအနေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အရင်တုန်းက နေပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်များ ရှိခဲ့သောငြားလည်း အီလက်ထရွန်နစ်စနစ်များ မတိုးတက်လာသေးသဖြင့် သိပ်မတိမထားမိသေးပါ၊ သို့သော်ယခုအချိန်မှာတော့ တိုးတက်လာတဲ့ ပညာရပ်တွေ အသုံြး့ပုလာတဲ့အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းတွေဟာ လူတိုင်းမှာမရှိမဖြစ် ဖြစ်လာခဲ့တာတွေကြောင့် အခုချိန်မှာပေါက်ကွဲမှုတွေကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ အဓိကထားပြီး စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ရတာပါ။
နေပေါက်ကွဲမှုဟာ ကမ္ဘာကြီးရာသီဥတုပြောင်းလည်းမှုနင့်လည်း ပတ်သက်နေတာပါ။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတာတို့ မိုးခေါင်တာတို့၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များစွာ ကျဆင်းတာတို့ဟာ နေပေါက်ကွဲမှုနှင့် သွယ်ဝိုက်ပြီး ပတ်သက်နေတာပါ။ ထူးခြားတာက(2011)ခုနှစ်လောက်က စပြီးနေပေါက်ကွဲမှု အကြိမ်ရေပိုများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာနေပေါက်ကွဲမှု အစက်အပျောက်သုံးခုလောက်အထိ တပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်နေတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဖြစ်ပေါ်မှုဟာ November 3, 2011 ရက်နေ့ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။
ခြုံငုံပြောရလျှင်တော့ (2012)ခုနှစ်မှာ မာယာပြက္ခဒိန်အရ ကမ္ဘာကြီးဟာပျက်စီးသွားမယ်လို့ ဟောထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်အထင်ကတော့ (2012)မှာ ကမ္ဘာကြီးတော့ မပျက်စီးနိုင်သေးပါ၊ သို့သော်လူတွေရဲ့ ပယောဂကြောင့်ရော သဘာဝရဲ့ပယောဂကြောင့်ပါ ကမ္ဘာကြီးမှာတော့ ဆိုးကျိုးတရားတွေ များလာမှာတော့ သေချာတာဆိုတာကိုပါဘဲ။
ဘုရားဟောကြားတဲ့ တရားသဘောအရဖြစ်ပြီးရင်တော့ ပျက်စီးရဦးမှာ သဘာဝတရားတော်နဲ့ ညီပါပေတယ်။ သို့သော်ဖြစ်ပြီးမပျက်သေးခင်မှာ ဘ၀အတွက် အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးစားရှင်သန်နေရဦးမှာပါလား ဆိုတဲ့အသိလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးကမ္ဘာကြီးပေါ်ရှိ လူသားများသဘာဝဘေးကင်းဝေးပြီး၊ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါး « Supermoon 2012 မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေ။ »
1 comment to Solar Explosion
Log in to Reply	Million thanks to Hero Naing.
« Supermoon 2012 မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေ။ »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum